Tababarka fiidiyowga ee Photoshop: Ilmada dhiigga (dabeecadda) | Abuurista khadka tooska ah
Tababarka fiidiyowga ee Photoshop: Ilmada dhiigga (dabeecadda)
Saameyn kale oo aad u madow oo aan ku dari karno astaamaheenna waa tan nabarro, cirro, iyo ilmo dhiig / madow. Tan awgeed waxaan u adeegsan doonnaa aalado iyo xulashooyin aan in muddo ah adeegsanaynay, iyo waliba baakadaha burushka ilkaha / ilmada ee aan kusoo jeediyay maqaal hore.
Tallaabooyinka waa kuwo aad u fudud oo aad iyaga ku raaci karto halkan:
Waxaan ka dhigi doonnaa maqaarka gabadhan mid aad u jilicsan, tan awgeed waxaan u abuuri doonnaa lakab cusub oo aan dooran doonnaa a midabka hore ee cirro leh (# C1C1C1) burush si cadaalad ah u madoobaadayna waxaan kuwada calaamadeyn doonaa aagga maqaarka oo dhan, dhib malahan hadii uusan sax aheyn, goor dambe ayaan ku dhameystiri karnaa qalabka masixi. Waxaan ku dabaqi doonnaa qaabka isku-darka iyo mugdi ku saabsan 50% lakabkan.
Waxaan aadeynaa sawirka asalka ah iyo aaladda hoos u dhig Waxaan ka shaqeyn doonnaa noocyo kala duwan oo dhexdhexaad ah oo leh 40% xoojin. Waxaan saameyn ku yeelan doonnaa aagga wareegyada madow, geesaha bushimaha iyo qoorta.
Qalabka tirtiraha, waxaan ka takhalusi doonnaa xadka indhaha, burush yar oo faafid ah waxaanan ku dhaqmi doonnaa lakabka aan ka dhignay midabka cawlan oo aan siinnay qaab isku dhafan oo midab leh.
Waxaan ku dabakhi doonnaa nabarro iyadoo a midabka hore ee guduudka ah (# 5c0000), waxaan ka shaqeyn doonnaa aagga indhaha, afka iyo qoorta oo waxaan siin doonnaa qaab isku-dhex-dhexgal ah iftiin jilicsan waxaana codsaneynaa a filter gaussian oo leh qiyaas qiyaas ah toban pixels.
Waxaan isku dari doonaa dhammaan lakabyada iyo qalabka hoos u dhig Waxaan ku shaqeyn doonnaa kala-goynta dhexdhexaadka iyo xoojinta 40%.
Waan codsaneynaa ilmada dhiigga burushkeena gaarka ah. Waxaan ku sameyn doonnaa lakab iyo midab casaan leh (# 5c0000), waxaan siineynaa qaab isku dhaf ah oo iftiin jilicsan leh. Waan nuquleyn doonaa markanna waxaan ku siin doonnaa qaab isku dhafan oo dusha sare ah. Waan nuquleyn doonnaa markii ugu dambeysay waxaanan siin doonaa qaab isku dhaf ah oo lagu dhufan doono.
Waxaan la ciyaari doonaa daahfurnaan ee lakabyadan haddii loo baahdo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » Photoshop » Tababarka fiidiyowga ee Photoshop: Ilmada dhiigga (dabeecadda)
haye Maxaa ku dhacay xirmadii ilmada iyo xiriiriyaha youtube-ka? ... Waxaan mar kale ku sii hakanayaa halkan
19 Daabacaadda Xawaaladda 'Halloween Flyer & Poster Templates' (PSD)
Xirmooyinka Burushka Ilmada ee loogu talagalay Adobe Photoshop